Kayakairan Daily | कायाकैरन दैनिक || शब्द–स्वीकृति (कथा ) – kayakairan.com
शब्द–स्वीकृति (कथा )
म गुन्टा काँध हालेर ‘आनन्दवन’ लेखिएको पर्खालभित्र छिरें । उमेर त्रिहत्तरकी सेताम्य फूलेकी वृद्धले लामो तपस्याबाट उठेझैं गरी विनाउत्साह चोरी औंलाले कोठा इंगित गरिन्, “ऊ त्यहाँ ।” म भ¥याङ उक्लेर गुन्टा बिसाएँ । र फेरि सुरु भयो जागिरे जीवनमा नयाँ कोठाको बसाइँ । केहीबेरको सुस्काइपछि घडी हेरें, आठ बजिसकेछ, हतार हतार होटेल पुगें । खाना खाएँ । पानीको बोतल बोकेर पुनः कोठा फर्किएँं ।
साँझको उही पर्खाल छिर्दैगर्दा केही भद्दा आवाज सुनिंदैं थियो, अलिक चनाखो बनेर कोठा छिरें । लोडसेडिङको समय परेछ, जिउ थाकेकै थियो । ओछ्यान मिलाउँदै गर्दा अघिको आवाज स्पष्ट सुनिन थाल्यो । सिलसिलाबद्ध फोहर शब्दको लस्कर, जो वक्ता थियो, ऊ नै एकदमै पराजित । अनुशासन, मर्यादा, धैर्यता, विचार यसरी निख्रन सक्दो रहेछ, मानिसभित्रबाट । पूर्णरुपमा भ्रष्ट, कुण्ठित अनि एकदमै दानवीयरुपको अभिव्यक्ति र चर्को मारपिट चलिरह्यो ।
कूजात, वेश्या, रण्डी…र पिटाइका सप्का स्याँट, स्याँटसँंगै गहिरिंदै गइरहेको रुवाइ ! नपिट् मलाई पापी ! नामर्द, बौलाहा । लाचार र शुष्क आवाजको बीचबीचमा तेस्रो स्वर पनि आइरह्यो “नपिट् भन्या अपराधी, छोड् भन्या ।” अत्याचार र निसहायपनाको कहालीलाग्दो समय मैले धेरै खप्न सकिन । छामछुम गर्दै भ¥याङ ओर्लदैं गर्दा कसैले मेरो हात च्याप्प समातेर, तान्दै कतै पु¥यायो । यो नयाँ घर, नयाँ कोलाहल, यो अपहरण र निखुर अँध्यारोले मलाई यस धर्तीका सारा पुराना भोगाइहरुको माया लाग्ने बनायो ।
लालटिनको मधुरो प्रकाशमा देखिएको गोल मिलेको चेहरा, पुष्ट छाती, निधारको माथिबाटै सुरु भएको सिउँदो, परम्परागत कोरीबाटीमा कम्मरसम्म झुण्डिएको चुल्ठो र संत्रासले खुलेका ठूला गाजलु आँखा अनि अपरिचित हेराइ, उसको पहिलो दर्शनको सार यत्ति हो । लगत्तै कानैछेउ आएर अधमरो आवाजले सोधी–“छुटाउन जान लाग्नुभयो होइन ?”
“तपाईं आफ्नै कोठामा जानूस्”, ठाडो आदेश गरी ! जीवनमै पहिलोपल्ट देखेको मानिसको दोस्रो वाक्य, त्यहीपनि धम्कीजस्तो न आदेश जस्तो । म अक्क न वक्क भएँ । अब लुरुलुरु चोटा उक्लिऊँ कि, प्रश्न गरुँ ? म अटेरी बालकझैं उसैलाई हेरिरहन्छु । त्यसपछि ऊ थपिन खोज्छे, “यस्तो घटना यस घरको दैनिकी हो । तपाईंको उपस्थितिले त्यहाँ केही सुध्रिन्न । त्यही भएर रोकें । बित्थामा अंकल तपाईंमाथि जाई लाग्नुहुन्छ । माथि जानुस् ।” म अन्तिम पटक उसलाई नरम हेराइ हेरेर चोटा उक्लिन्छु । आवाज उसैगरी आइरह्यो । घटना नै त्यस्तै छ, कारुणिक ! लाग्छ खुँखार नाट्यकर्मी जुटेर नेपथ्यमा ‘रिहर्सल’ गरिरहेछन् । पीडक अझै उत्तेजित हुंँदै गइरहेछ । पीडित थप पराजित र साक्षी उनै सेताम्य फुलेकी बूढीआमा जो शुष्क आवाजमा क्रन्दन गरिरहेकी छिन्, भयो नपिट् भन्या । छोड् भन्या । पापी, राक्षस नकुट् भन्या, जन्मदिने आमाको ममत्वपूर्ण गाली, वाह ! उता पिटिनेको स्वर आउँछ । अपराधी ! कुकुरको झोल धोंकेर छाडा नहो । मर्लास् फेरि । ल पिट अझै पिट । यस्तै यस्तै…।
रुदाँरुदै सिद्धियो कोही भने ? मानव आवाजले भन्दा वेशी, कम्मरपेटिको सप्काले, ज्यादै दुःख भइरह्यो सहनलाई । यो पीडाको निरन्तरता र मानव चीत्कारको संगीतभित्र मैले निदाउने आँट गरिन र फेरि ओर्लें । उही ठाँउमा, उसैगरी, उसैले उही ठाँउमा पु¥याई र हकारी । नजानुस् भन्या । अनिष्ट हुन्छ । तपाईं पराइ मान्छे, कति चासो परेको ? टोलैभरि आफन्त छन् । सुनिरहेछन् । तपाईं पनि सुन्नुहोस्, केही दिनमा बानी पर्छ । “तपार्इंका लागि त म पनि पराई नै हँुं नि, मलाई किन रोक्नु भयो त ? के उनीहरु कुनै बनावटी खेल खेलिरहेछन् ?” मेरो कुरा नसुनेझैं गरेर उसले आफ्नो दैलो थुनी र भनी, “माथि जानूस् ।” धेरैबेर त्यही भ¥याङमा अडिएँ । आवाज केही कम आउँदो रहेछ माथिभन्दा । सुस्तरी माथि उक्लिएँ फेरि । आवाज उसैगरी आइरह्यो । मा¥यो नि बाबा, एक्कासी रुवाई बढ्छ । मा¥यो नि राक्षसले, बूढी आत्तिइन् । म निस्सासिएँ ।
थुक्क नरकमा आइएछ ! ढोकामा त आनन्दवन लेखिएको थियो नि । कि हरेक नरकको ढोकामा स्वर्ग लेखिन्छ ? ओहो ! मान्छे यतिसम्मको दशा भोग्न पनि बाँच्दोरहेछ, परिवार बनाउँदोरहेछ । संसारको यो वीभत्सता भोग्न पनि आमा हुनुपर्दोरहेछ । समाजको सभ्यता ? यतिसम्म मौन हुँदोरहेछ । आँखा झिमिक्क हुन मान्दैनन् र पनि ओछ्यानमा पल्टिन्छु । अनेक तर्कना आइरहन्छन् । आखिर यो परिवारलाई बाँधिरहने तत्व के हो । यतिसम्मको निकृष्ट जीवनका लागि मान्छेलाई सम्बन्धमा झुण्ड्याइरहने बल के हो ? पिट्ने, पिटिने थाक्दै गएझैं आवाज मधुरो हँुदै गयो । रुवाइ मधुरो हुँदै गयो । एउटा कारुणिक सिनेमाको अडियो सुनेर रात काटेझैं भइरह्यो । जुन सिनेमाका पात्रहरुको दर्शन घामको उदयसँगै हुनेछ । आहा ! पात्रहरु निलडामसँगै अथवा घाउ खतसँगै देखिनेछन् ।
त्यत्तिकैमा पर फाँटभरि एक हुल स्याल कराउन लागे । त्यो आवाज र घरबेटीको कोलाजका बीच कतै तालमेल भएझैं लाग्यो । हुइयाँ, हुइयाँ गर्दै रातभरि रुन त स्यालहरु छँदै थिए नि, यी पात्रहरु किन रुँदा हुन् रातभरि ! जे होस् स्यालको आवाजले मलाई केही उन्मुक्ति, केही नवीनता अनुभूति भयो । कतिबेला निदाएँ ? पीडा भरिएको रातबाट कसरी मुक्त भएँ ? जीवन र त्यसको विद्रुपकारी भोगाइका बीचबाट निःसृत संवेदनाको अनुभूतिबाट कसरी गुज्रिएँ ? तर, उषाले आँगन धोइसकेर पिंढी पोत्दै, मेरो झ्यालबाट चिहाउँदा पो, ब्यूँझिएछु ।
बिहान भएपछि एक रातमा तीनपटक अपहरण गर्ने पात्र र ती प्रखर कलाकारको दर्शनमा लालायित भएपनि म अफिस निस्किँदासम्म देख्न पाइएन । दिन र साँझ बाहिरै बित्यो । नाटक सुरु नहुँदै सुत्ने योजनाले खाना खाइवरी ओछ्यानमा पल्टिएँ । तर, चुलबुल गरिरहने मनले निदाउन दिएन । ओल्टो, कोल्टो गरिरहें । त्यस्तैमा आवाज आयो, “तेरो बाउको खा’को छु र ?” अनि ल खा, तेरीमा…हँुदै गर्दा नमिठो गरी सिसा फुटेको आवाज आयो ‘झरम्म’ । त्यस्तैमा रुवाइ सुरु भयो । मैले सिरानीले कान थिचें । दोस्रो प्रहर रात, आधा घर्किंदा स्यालको आवाज आयो । विस्तारै पात्रहरु चर्किए, दर्किए र थाके । त्यसपछि बल्ल मेरो आँखामा निंद जाग्यो । उजेलो र बिहान पसेको धेरैबेरपछि उठें र झ्यालबाट तलतिर हेरें । हिजोको बिहानीमा सुनसान आँगन आज भरिलो देखियो ।
सुकुलमाथि हरिणको छाला ओछ्याइएको छ र छेवैमा बेतबाँसको कुर्सीमाथि उमेर पैंतालिसको दुब्लो, अग्लो, गोरो आकृति गहिरा आँखा र मदिराको गिलास बोकेर चुरोट तानिरहेको छ । छेवैमा सेताम्य फूलेकी उनै वृद्धा चामल केलाउँंदै छिन् । त्यस्तैमा लामो कपालको लाछी नितम्ब मुनिसम्म हल्लाउँदै, उमेर छत्तिसको खिरिलो शरीर आँगनमा प्रवेश गर्छ । दुवै हातको बीचमा रहेको किस्ती र पानीको गिलास देख्दा लाग्छ, ऊ कुनै सुकिलो होटलकी वेट्रेस हो । मुख्य पात्रचाहिँ हातको चुरोट टे« र मदिराको छोटो गिलास छेवैको स्टुलमा राख्दै किस्तीबाट पानीको गिलास र औषधिका गोली स्वीकार गर्छ । र खुसी लुकाउन शीर तल गर्छ ।
त्यत्तिकैमा “कुकुरको झोल र औषधिसंँगै खा !” वेट्रेस झटारो छाड्दै सुकुलमाथि ओछ्याइएको हरिणको छालामाथि बस्न पुग्छिन् । उनी बसिनसक्दै ‘कुकुर्नी !’ र एक खित्का हाँसो फुस्किन्छ । मलाई त्यो वार्तामाथि ताली पिट्न मन लाग्छ । तर, रोकिन्छु । मेरो स्वभाव रोकिने खालको त होइन, तैपनि रातभरि अपहरित भएको घरभित्र छु । सायद त्यसैको प्रभावले रोकिन्छु । भुइँमा बसेर चिया पिउँदै गरेको आकृतिको निधारको माथिल्लो दायाँ भागमा गज र टेपका दुई सेता धर्सा र दुवै आँखाका खोबिल्टा सुन्निएका देखिन्छन् । जिउभरि निलडाम छोप्ने गरी पहिरिएको कलेजी रंगको कुर्ता, सेताम्य फुलेकी वृद्धको हातले चामलमा बियाँ टिपिरहेको दृश्य र घरि आमा र घरि श्रीमती हेर्दै अधकल्चो पेगसँग लम्पट भइरहेको मानिसबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध र त्यस्तो अनुपम सम्बन्धलाई चारैतिरबाट बाँधिरहन खप्पिस समयको रुप, कुकुरको झोल, बीच–बीचमा आइरहने नाङ्लोको पट्याँसपट्याँस आवाज, सबैकुरा मलाई होलसेलमा मन पर्छन् ।
थुइक्क प्रेम, तेरो रुप ! यही रुपको पाप पक्षले मलाई रातभर सकस भइरह्यो । मेरा खुट्टा चिलाए । म भ¥याङ बजाउँदै ओर्लें । अपहरण गर्नेले कतै बाटो रोक्ली कि भनेर । तर, नदेखिएपछि आफैले ढोका ढक्ढकाएँ । खुलेन । म अलमलिएर शौचालयतिर सोझिएँ । आँगन र तीन पात्र कटेर हिंड्नुपर्ने थियो । अभिवादन स्वीकार्ने मुडमा छैनन् जस्तो लाग्यो । म चुपचाप कटें । शौचालयको दुर्गन्ध मौलिक थिएन । भिजेका चुरोटका ठुटा र रक्सीको गन्ध ह्वास्स नाकभरि आँउछ ।
हलुँगिन पनि निकै धौ हुन्छ मलाई । फर्किदा कुरा गर्न मुख चिलाउँछ । तर, उनीहरु कुरा गर्ने मुडमा भएजस्तो लागेन । हारेको खेलाडीझैं फेरि भ¥याङ छेउ पुगें । तर, ढोका खुलेन । म उक्लिएँ । शनिबारको दिन तीन रातदेखिको निद्रा पु¥याउनु थियो । होटेलबाट फर्किएको केहीबेरमै फुस्स निदाएँ । खुब सुतिएछ । साँझपख ब्युँझिएछु, घडीमा सवा तीन भएछ । बाथरुमबाट निस्किएर, शिरीषको फूल पढ्न सुरु गरें । साढे पाँचतिर चिया चमेनाका लागि निस्किएँ । साथीहरु भेट भए । साँझ खाना खाइवरी बल्ल कोठा फर्किएँ । सुत्नु त थिएन नै, काम पनि थिएन । अधकल्चो शिरीषको फूल तानेर पढ्दै थिएँ । सकम्बरी मरिसकेपछि पढ्नै मन नलागेको बाँकी पाना त्यसै राखेर बत्तीको वरिपरि घुमिरहेका तीन पुतली हेर्दै थिएँ ।
आज टन्न खाइन्छ । नो किचकिच, नो किचकिच भन्दाभन्दै मारपिट सुरु भयो । रुवाइ सुरु भयो । करुणादायी यापनभित्र एक पुरुष र दुई नारी मञ्चित भइरहे । विना डाईलग र विना सिक्वेल मञ्चमा उभ्याएर भरिभराउ दर्शकका अघि पर्दा खुलेपछि अस्तव्यस्त कलाकारको भूमिका हेरिरहेको समय काटिरहे जस्तो । भूमरीभित्र रुमलिएजस्तो लागिरह्यो । रक्स्याहा बूढोको फन्दामा नपरेर धन्न स्वतन्त्रतापूर्वक मरिछ्यौ सकम्बरी, मनमनै सम्झिएँ । र, किताब मिल्क्याएर फेरि भ¥याङ बजाउँदै ओर्लिएँ । अपहरणकारीले च्याप्प नसमाउँदै, इसारा गरेर उसैको कोठामा भित्रिएँ । ट्युबलाईटको दुधिलो प्रकाशमा, रातो पहिरनमा खुलेकी उसको चित्र र कोठाका यावत कुरा सुन्दर थिए ।
…म शब्द । त्यसपछि उसले आफ्नो नाम टक्रायाई, “म स्वीकृती ।” हजुर किन यहाँ, यतिबेला ? के भयो र ? के भइरहेको छैन र यहाँ ? यो चीत्कार, त्यो करुणा ? त्यो मारपिट ? यो समाज ? के हो यो सबकुरा ? आखिर तिमीहरु त केही बोलेनौ, र मलाई पनि बोल्न नसक्ने बनाइदियौ, आखिर किन ? (अपरिचित म, स्वीकृतिसंँग आक्रोशित भएछु) यतिविधि चासो किन ? (उसले बेसुरा बजाई) स्वीकृति ! पृथ्वी एउटा गाउँ भइसक्यो, देश आँगन । एउटै घरभित्रको दमन, क्रन्दन, चीत्कार, रुवाइ । प्रताडित गर्ने र सहने दुवै रुपको अत्याचारको शिकार भाउजू र बूढी आमा मात्र हुन् कि तिमी, म र यो बस्तीका सारा मानिस ? अन्याय गर्नेभन्दा सहने झन् ठूला अपराधी हुन् । गर्नेले त अरुमाथि गर्छ । तर, सहनेले त स्वयंभित्रको मानवतामाथि अपराध गरिरहेको हुन्छ, होइन र ?
मभित्रको मानिस जुरुक्क गर्छ । त्यसपछि स्वीकृति सुस्तरी बोल्छे, “त्यो उनीहरुको आन्तरिक जीवन व्यवस्था हो । आफ्नै मर्जीको । गुहार मागेको सुन्नुभयो र कसैले ?” उसको गुहार शब्दले मलाई, भित्र कतै ठक्कर लाग्छ । म प्रवाहित हुन थाल्छु । तिमी र म हाम्रो इच्छाले नै जन्मिएका हौं ? अवोध हुँदा हामीले दूध माग्यौं कि रोयौं ? रुवाइ स्वयं एक बेग हो, सहानुभूतिको खोजमा निस्कने । कि तिमीले रुवाइ सुन्दिनौं ? अथवा रुवाइ सुनेर पनि संवेदना अनुभूत गर्दिनौं ? के तिमी मातृत्वकै अंश होइनौं र ? नैसर्गिक वा पारिवारिक स्वतन्त्रताको नाउँमा अन्याय गर्न र सहन छुट छ ? समाजको बीचमा बसेर अन्याय सहनु समाजप्रतिको अविश्वास होइन र ? समाजमा बसेर मानिस रोइरहँदा ढुंगा भएर निदाउनु अप्राकृतिक भएन र ? के प्राकृतिक गुणको विसर्जन गर्ने बजार हो, मानव सभ्यता ?
शब्द दाइ, तपाईं भावुक हुनुहुँदो रहेछ, मेरो आवेगभरि पानी छ्याप्छे । त्यत्तिकैमा बाहिरबाट आवाज आउँछ, गुहार ! गुहार !! मलाई पछ्याएर स्वीकृति अघि सर्छे र मेरो हात तान्छे । हामी बाहिर पुग्दा रक्सी र रगतको गन्ध फैलिइसकेको थियो । उनी दुवै हातले कञ्चट समाएर उल्टी गरिरहेका थिए । छेवैमा भाउजू थिइन्, भाव शून्य र निसहायजस्तो । मैले उनको टाउको समाएँ । स्वीकृतिले एम्बुलेन्स बोलाउन मोबाइल डायल गनिन् । भाउजू केही सम्झिएझैं गरेर भित्र पसिन् । बूढी आमाले झोला निकाल्दै गर्दा स्वीकृतिले हात दिइन् । मैले पानी मागें । भाउजूले काँसको लोहोटाभरि पानी ल्याइन् । तालमेल मिलिरहेको थियो, एम्बुलेन्स आइपुग्यो । भाउजू, म, स्वीकृति र ड्राईभर मिलेर बिरामीलाई एम्बुलेन्सभित्र राख्यौं । आमालाई घरमै बस्न अनुरोध ग¥यौं । आफ्नो बल र सामथ्र्यको अन्दाज गरेर होला बूढी चुपचाप उभिएर हेरिरहिन् । हामी चारै जना आनन्दवनको गेटबाट बाहिरियौं । हस्पिटल बसेको दोस्रो दिनसम्म हामी तीनैजना प्रायः मौन बस्यौं । तेस्रो दिनको बिहान बिरामीको होस् आएपछि स्वीकृति र मसँगै चिया खान बस्यौं ।
बिरामीको अन्यौलग्रस्त अवस्था र अनिंदोको दबाब मिल्क्याउन थोरै हाँस्ने मुडमा ओर्लिएँ, नाम पनि कसरी जुरेछ है हाम्रो, शब्द र स्वीकृति ? र पहिलो भेटचाहिं अपहरणको शैलीमा । धत् ! ऊ मुस्कुराई । स्टिल प्लेटमा दुई कप चिया आइपुग्यो । भोक र थकाइको प्रभावले होला एकैसाथ चिया समायौं । हात छोइए । उनको आँखामा थोरै लाज भरियो । त्यत्तिकैमा आहत आयो । नास्ता पनि खााउँ न है ! भाउजूको आवाज । छेवैको कुर्सी भाउजूको सौन्दर्यले भरियो । बिहानको नास्ता जेरी, पुरी र मटर भुटुरा आइपुग्यो । सायद भाउजूले पहिल्यै अर्डर गरिसक्नुभएको थियो । मैले व्यंग््य गरें, नास्ता त गुहार नमाग्दै आयो त । स्वीकृति खित्का छोडेर हाँसी । भाउजू नबुझेर अलमल हुनुभयो । तर, स्वीकृतिको हाँसो देखेर हँसिलो भाव तैरिएको अनुहार सरसर्ती पढेर कुरा कोट््याउने मुडमा ओर्लिएँ ।
“भाउजू एउटा कुरा सोधुँ है”, मैले भनें । “ऊ सरलाई जहिल्यै हतार हुन्छ”, स्वीकृति चिढिई । कचौराको तरकारी एकपटक चलाएर भाउजू बोल्नुभयो, “सोध्नु न बाबु । आखिर पहिल्यै किन रोक्नुभएन दाइलाई ?”, धेरै दिनदेखिको भोगाइको स्वरस प्रश्न बनेर पोखियो ।
भाउजूको आवाज उछिनेर कोष भिजाउँदै आँसु छचल्किए । मैले गह्रुँगो गरी उहाँंलाई हेरें, “माफ पाउँ भाउजू, भैगो ।” “होइन बाबु ! बर्षौंपछि कसैले आत्मीयतापूर्वक मेरो निजी जीवनप्रति चासो राखेको खुसी हो यो । मलाई बोल्न दिनुस्, छोटकरीमा बोल्छु । दुवैको परिवार सम्भ्रान्त थियो । हामी सुरुमा प्रेमी–प्रेमीका र पछि दम्पत्ती भयौं । पारिवारिक संस्कार र चालचलनले विहेपछि उनी मालिक र म सेविका भयौं । मालिकलाई अभिभावक, प्रेमी, सद्भाव, ममता केही चाहिंदो रहेनछ । जेसुकै गर्न छुट । साथीभाइ, रवाफ, आदत, कूलत, जिद्दीपनाको अगाडि मेरो जीवन डल्लिदैं खुम्चिदैं गयो । मेरो उपस्थिति, मेरो प्रेम, मेरे अस्तित्व अतिक्रमणमा परेको कुवाजस्तै सुक्दै–सुक्दै गयो । हाम्रो दाम्पत्यमा उसकै कारण बाँझोपन आइलाग्यो । वैंश छउञ्जेल आशा रह्यो । वैंश खसेपछि बाटै हरायो । न चुँडिन सकें न कतै जोडिन सकें । अन्त्यमा पश्चातापको रुवाइजस्तो फैलियो ।”
क्यान्टिन वरिपरिका मानिस हमीतिर आकर्षित भए । स्वीकृतिले भाउजूलाई डो¥याएर अघि बढी, म रिसेप्सनतिर सोझिएँ । त्यही दिन रिपोर्ट आयो, ‘सिरोसिस अफ लिभर एण्ड डिफल्टर टी.बी. ।’ बिरमीको भर्ना र भाउजूको पनि जाँच थपिएपछि स्वीकृति र म फर्किने भयौं । भाउजूका माइती आफन्त आएपछि हामीलाई पनि सजिलो भयो । साँझ पश्चिम जाने मोटर चढ्यौं । हेराहेर हुँदाहुँदै घरि ऊ निदाई घरि म । एउटै सीटका दुई यात्रा आपसमा ठोक्किए, संवेदनशील केही हेराहेर भए, काँध र कुम जोडिए । मलाई उसले एकपटक ‘दाइ’ भनेर सम्बोधन गरिसकेकी नै थिई । मुग्लिङको लामो जाममै रात भागेछ । बिहानको झुल्के घाममा पुलचोक नारायणगढ ओर्लिएर हातमुख धोयौं । बस मर्मतका लागि एकघण्टाको समय मागेर ग्यारेज छि¥यो, हामी लमतन्न परेर चिर निद्रामा सुतेको पुलको छातीमा उभिएर उत्तरतिर देखिएको हिमालसँग भुल्यौं ।
त्यही मौकामा मैले प्रश्न गरें, “स्वीकृति ! भाउजूलाई त्यो परिवारमा बाँधिरहने शक्ति के होला हगि ?” उसले स्वाभाविक भएर जवाफ दिई, “ध्वाँसो पोतिएको प्रेम । दुर्गन्धित पोखरीमा फुल्न विवश प्रेम ।” कविताको शीर्षकजस्तो जवाफ थापेर म आफैसँग फुसफुसाएँ, “ओहो ! प्रेम, सार्वभौम बल रहेछ हगि ।” त्यही मोटर चढेर बुटवल पुगेपछि ऊ आफ्नो घर पाल्पातिर लागी । मलाई पनि साथै लैजान धेरै कर गरी, तर, मैले अफिस देखाएर मानिनँ । उसले उत्तरको बस समाती, म अझै पश्चिम लागें ।
त्यो घरको शान्ति मलाई झन बिझाउन थाल्यो । भाउजूहरु अरु पन्ध्र दिन उतै बस्नुपर्ने थियो । स्वीकृति घरायसी कामले थप केही दिन भुल्ने सूचना पाएँ । अफिसबाहेकको समय सकस भएरै बित्यो । पाँचौं दिन मेरो सरुवाको चिठी आयो, सातौं दिन घरबेटी आमालाई घरभाडा तिरें । अफिस, त्यो मानवता छेलिएको भीड र प्रेमका दुई फुच्चे आकृतिको भव्य शहरबाट म रमाना भएँ । मोटर चढेर अलिक वर आएपछि लाग्यो, स्वीकृतिको मोबाइल नम्बर पनि मागिनँ ।
वर्षौंपछि फेरि त्यही शहर पुगें । आनन्दवन पस्ने रहरले भिजें । भाउजू रातो पहिरनमा देखिइन्, मलाई देखेर अचम्म र खुसीले गद्गद् बनिन् । आत्मीयतापूर्ण स्वागत गर्दै कोठामा लगिन् । चिसो पानी हातमा राखिदिंदै भनिन्, “तपाईं त निष्ठुरी पनि हुनुहुँदोरहेछ । त्यत्रो ममता दिएर विनासूचना लापत्ता हुनसक्ने, बहादुर !”, थोरै गाली मिसिएको आक्रोस पनि । मैले यताउता हेरेको चाल पाएर आफै बोल्न लाग्नुभयो, “उसलाई फर्काएर ल्याउन सकिएन । आमा पनि उसैको काजक्रियाभित्रै खस्नुभयो ।”
केही समय लाग्यो म रित्तिएँ । स्वीकृति मात्र थिई सहारा । उसले तपाईंसँगको साक्षात्कार र वेगको व्याख्या गरी । त्यही उपेक्षित मानवताको पुनरुत्खनन् र महिला मुक्तिका लागि सक्रिय हुने कुरामा मलाई सहमत गराई । मेरो त बाटो भेटियो तर उसले आधा जीवन गुमाई । ओहो ! मैले लामो सुस्केरा हाल्दै प्वाक्क सोधें, “स्वीकृति खोइ त ?” उनी आफ्नै तालमा बोलिरहिन्, “ऊ यहीं छे । जहाँ तपाईले छोडेर जानुभयो त्यहीं ।” शब्दले स्वीकार गर्नु÷नगर्नु बेग्लै कुरा । स्वीकृति त प्रेमले भरिएकी छे । त्यसपछि म, स्वाभाविक म रहन सकिनँ ।